ဗာတီကန် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဗာတီကန်
Travel To Florence: တစ်ဦးအစဉ်အဆက်-Blooming သီးသန့်
ပထမရာစုဘီစီ, ရောမသင့်လျော်စွာဒီဟောင်းအဘိဓါန် Etruscan မြို့ Florentia အမည်ပြောင်း, သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်ဖို့လတ်. ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူ, ဖလော (ဖလော) Renaissance အနုပညာများ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းအခွင့်အာဏာဖြစ်လာမှ၎င်း၏ namesake သစ္စာကျန်ရစ်, စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု. The romantic narrow passages of the city's core hold timeless treasures that gracefully dissolve the rest of the world's troubled existence. အမှန်တကယ်စစ်မှန် Renaissance အတွေ့အကြုံအတွက် Florence မှခရီးသွားခြင်း. S...
ရှေးဟောငျးအီရောမမြို့၏ Catacombs သွားရောက်ကြည့်ရှု
If you are considering traveling to Italy for your vacation, here are some suggestions forasafe trip. ဖြည့်စွက်ကာ, the links at the bottom of this article are full of resources to answer any questions you may have about Italy.
သငျသညျရောမမွို့တှငျတစျခုတပတ်ရင်တောင်, သငျသညျကအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်. သွားလာရင်းခရီးသွားများအတွက်, သော်လည်း, ဒီနေရာမှာရောမမြို့ရဲ့လျှပ်စီးအစာရှောင်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်.
ရောမမြို့မှာတော့တစ်ဦးက Short လူငယ်များသို့အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမရောမမြို့ထက် သာ. ကောင်းသော Is.
ရောမမွို့ရှိအတိုချိုးယူအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်, နှင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်တစ်ဦးအနည်းငယ်ပိုပြီးပေးသည်, ကြီးစွာသောအကြံပြု "Insider" သငျသညျစတင်ရန်အရင်းအမြစ်.
သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့သင်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေပါလိမ့်မည်သောလှုပ်ရှားမှုများယူတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုက်ညီမယ့်ဟိုတယ်ကိုရှာဖွေခြင်းလွယ်ကူသောလာ, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းအောင်မြင်ရန်လိုချင်တာတွေ. အလွန်ကာမဂုဏ်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်လုံးဝစိတ်ပူစရာ-အခမဲ့သင့်ရဲ့စာရင်းတွင်နောက်ဆုံးကြွလာလိုလျှင်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦး 3-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ကြိုးစားရန်ကြိုဆိုနေ. ဤသည် 3-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များနှစျသိမျ့သို့မဟုတ်ဇိမ်ခံမဆိုဒီဂရီပူဇော်မပြောမဖြစ်; သငျသညျ advant ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်မည်သည့်အခါကပဲခမ်းနားထည်ဝါစွာသာယာအဆင်ပြေမှုများအဘို့အပေးဆောင်ခံရဖို့လက်တွေ့ပုံရသည် ...
ရောမပြုကြဖို့ကိုဘယ်လို 48 နာရီ
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Worldwide မှဦးတည်ရာနေရာများ
Have you ever thought of traveling around the world visiting different cities, touring the great attractions of the world such as the British Museum on London, the Puerta del Sol of Madrid, the Colosseum in Rome, the Winter Palace in St. ပီတာစဘတ်, not to mention all the sites for you to see in Hong Kong, ဆစ်ဒနီ, နယူးယောက်စီးတီး, Los Angeles and Chicago. You could easily spendayear traveling through just the cities listed here. Here are some of the highlights you wont want...
တစ်ဦးကပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုမကြာသေးမီကလက်ထပ်ခဲ့ကြကြောင်းစုံတွဲများအဘို့ကြီးစွာသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. အတူတူသင့်အိမ်ထောင်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနှင့်အပန်းဖြေ, သင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်၏ sucess ခံစား. သင်နှင့်သင့်အသစ်များကိုအိမ်ထောင်ဖက်အဘို့သင့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရသောအခါသင်ကသင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဒီတော့အချို့သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလိုအပ်ပါသည်သကဲ့သို့စုံလင်ခြင်းရှိချင်လိမ့်မယ်. 1. ဟာဝိုင်ယီကျွန်းဟာဝိုင်ယီပျားရည်ဆမ်းခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့် origional မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်. မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရတဲ့တစ်နေရာမှာနိုင်ဒါမှမဟုတ်အပူပိုင်းရှုခင်းကိုခံစား. သင်တစ်ဦးခရီးစဉ် t ကိုယူနိုင်ပါတယ် ...
အတွက်ဖလောလုပ်ဖို့ဘယ်လို 48 နာရီ
သင်ရုံမနှမြောဖို့ရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူအနုပညာလောက၏အ Renaissance မြို့တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ, ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသင်သွားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပျေါလှငျသငျသညျထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းတွေ့နိုင်ပါသည်ပါဘူး? ဤသူသည်သင်တို့ကို Florence အတွက်တိုတောင်းတဲ့နေထိုင်ထဲကအများဆုံးရရန်များအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်.
မင်္ဂလာပါ Montreal ကနေ
ကနေဒါခရီးသွား Prince Edward Island တွင်ရန်အလည်တစ်ခေါက် Include သင့်သ
တစ်ဦးက New York City, Limousine ဌားရမ်းသည့်အခါစဉ်းစားကြည့်ပါအရာ
ဆိပ်ကမ်းကျေးရွာ San Diego မှ
ဘန်ကောက်တွင်စျေးဝယ်သင်ကပိုက်ဆံ Oodles ကယျတငျနိုငျ
တရုတ်တန်းဘတ်စ်ကားလိုင်းတစ်ဦးကဘတ်ဂျက် Traveler ရဲ့အိပ်မက် Are
ခရီးသွားကယ်လီဖိုးနီးယား: စင်စစ်အဆိုပါ Golden ပြည်နယ်
ငှားရမ်းခြင်းမော်တော်ကားအာမခံ: အမျိုးအစားများ, လွှမ်းခြုံ, နှင့်အကြံပြုချက်များ
တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်တွင် Vacationing များအတွက်သိကောင်းစရာများ
တစ်ဦးက New York မြို့ Limousine ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလွယ်တကူခန့် Get
နယူးယောက်စီးတီးမှ Ultimate ဟိုတယ်လမ်းညွှန်
Tenerife ရဲ့ Flora ထိုအ Fauna